काभ्रे कांग्रेसको गाउँ/नगर अधिवेशनको परिणामले एमाले खुशी कि दुःखी ? – मिलिजुली खबर
काभ्रे कांग्रेसको गाउँ/नगर अधिवेशनको परिणामले एमाले खुशी कि दुःखी ?
काभ्रेको १३ मध्ये १२ वटा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले गाउँ/नगर अधिवेशन सकाएको छ । ६ वटा नगरपालिका मध्ये पनौती, नमोबुद्ध र पाँचखालमा सर्बसम्मत नगरसभापति चयन भए ।
धुलिखेल, बनेपा र मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा निर्वाचन मार्फत नगरसभापति चयन भए । त्यस्तै ७ वटा गाउँपालिका रहेको काभ्रेमा भुम्लु, रोशी, चौरीदेराली र खानीखोला गाउँपालिकामा सर्बसम्मत गाउँपालिका सभापति चयन भएका छन् । तेमाल र बेथानचोक गाउँपालिकामा निर्वाचन मार्फत गाउँपालिका सभापति चयन भएका छन् । महाभारत गाउँपालिकामा अधिवेशन नै भएको छैन् । स्थगित गरिएको छ ।
चुनाव भएको तीन वटा नगरपालिकामा सबैभन्दा रोचक बनेपामा देखियो । मत अन्तरको मात्रै रोचक होईन । मत खसेको तौर तरिका पनि भिन्न छ । जिल्ला सभापति मधु आचार्य प्यानलका नगरसभापतिका उम्मेदवार शान्ति रत्न शाक्यलाई १ मतले पछि पार्दै पूर्व जिल्ला सभापति शिव हुमागाई प्यानलका उम्मेदवार महेश कुमार कर्माचार्य विजयी हुनुभयो ।
बनेपा र धुलिखेलको निर्वाचनले कांग्रेस सहितका दललाई भुगोलको मत र राजनीतिमा समेत सचेत गराएको छ । धुलिखेल नगरपालिकामा कांग्रेस नगरसभापतिमा बिदुर बहादुर बस्नेत विजयी हुनु र बनेपामा नगरसभापतिमा बाहेकका पदाधिकारीको मतबाट प्रष्टै थाहा हुन्छ । यस्तै छिट्टा कांग्रेसको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पनि परेको देखिन्छ । नेतृत्व सधै एकै ठाउँ र एउटै मात्रै समुदायको वरिपरि रहिरहन्छ भन्ने बुझाईलाई बिलकुल गलत साबित गरिएको छ ।
कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन भएपनि यसलाई आगामी स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनलाई समेत आँकलन गरेर समीक्षा हुने गरेको छ । खास गरी ठूलो दल एमालेले काभ्रे जिल्लामा कांग्रेसको वडादेखि गाउँ/नगर अधिवेशनलाई निकै नजिकबाट हेरेको पाईन्छ ।
अघिल्लो पकटको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एमालेले धेरै ठाउँमा कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षलाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा पार्ने र नसके कांग्रकांग्रेसभित्रै थप चिढ्याउने रणनीति अबलम्बन गरेको थियो । यो पटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचन आसपास भैरहेको कांग्रेस अधिवेशनको एमालेले निकै नजिकबाट नियालिरहेको पाईन्छ ।
खास गरी एमालले दुई गुट बीच निर्वाचन भएको ठाउँमा मत परिणाम र सर्बसम्मत नेतृत्व चयन भएको ठाउँमा मतदाता र उम्मेदवारको आंकलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । जसले आगामी संसदीय निर्वाचनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । अहिलेदेखि कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षका बारे जानकार रहन पनि एमालेलाई कांग्रेसको गाउँ/नगर अधिवेशन सहयोग सिद्ध बन्ने निश्चित छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पनि कांग्रेसभित्र अत्यन्तै ठूलो घात भएको स्वंय कांग्रेसका नेताहरू स्वीकार गर्छन् । कांग्रेसको गाउँ/नगर अधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन भएका ठाउँमा साम्प्रदायिक मत अनपेक्षित देखिएको छ । सर्बसम्मत निर्वाचित भएको ठाउँमा एक पक्षले अर्को पक्षसंग सहमति गरेका छन् । त्यो सहमति कार्यान्वयनमा नआउने अवस्था देखिन साथ आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार विरूद्ध जाईलाग्ने पक्का छ । यसलाई पनि एमाले काभ्रेले मसिनो ढंगबाट निल्याएको पाईन्छ ।
यो पटक जिल्लामा पूर्व सभापति शिव हुमागाई प्यानलले बर्चस्व कायम राखेको छ । वडासभापति देखि गाउँ/नगरसभापतिसम्म हुमागाई प्यानल हाबी देखिएको छ । शिव हुमागाई आफैले फेरी एकपटक जिल्ला सभापतिको आकांक्षा राखेपछि काभ्रे कांग्रेसको राजनीति निकै रोचक मोड तर्फ डोरिएको देखिन्छ । यो पटक मधु आचार्य प्यानल केहि रक्षात्मक भने देखिएको छ । झट्ट हेर्दा अहिले वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका अधिवेशनको परिणाम हुमागाई प्यानल हौसिएको छ । आचार्य प्यानल निरास देखिन्छ ।
कांग्रेस धुलिखेल नगरपालिका-२ का उपसभापति तामाङले भने 'म एमाले प्रवेश गरेको छैन्'